မာ့ရှ်မဲလို - ဝီကီပီးဒီးယား
Marshmello သည် EDM ပရိုဂျူဆာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး DJ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ Jack U နှင့် Zedd တို့၏ သီချင်းများကို Remix လုပ်ရင်း နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို စတင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Omar LinX, Ookay, Jauz, Slushii အပါအဝင် DJ များနှင့် ပူးပေါင်းကာ သီချင်းဖန်တီးမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သူ၏ single သီချင်း Alone ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Billboard ၏ Hot 100 chart စာရင်းဝင်သည်အထိ အောင်မြင်လာခဲ့သည်။
၁.၂ Stage persona and identity
၃.၂ ၂၀၁၆ - ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ် "JoyTime"
၃.၃ ၂၀၁၇ - ပူးပေါင်းဖန်တီးမှုများနှင့် Forbes တွင်ပါဝင်လာခြင်း
marshmello ဟာ marshmallow မုန့်ပုံစံတူ ခေါင်းအဆောင်းတစ်ခုကို စွပ်ပြီး မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့။ သူဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အခုထိ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးသလို တိတိကျကျ အတည်ပြုထားခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ marshmello ဟာ Dotcom လို့သိကြတဲ့ အမေရိကန်ဒီဂျေ Chris Comstock ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အများစုက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဖန်တီးတဲ့ ဂီတပုံစံတွေ တော်တော်လေး ဆင်တူနေပါတယ်။ နောက်ပြီး နာမည်ရဒီဂျေ Skrillex ကလည်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ marshmello ကို Chris ဆိုပြီး ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က marshmello ရော Dotcom ကိုပါ Moe Shalizi ဆိုတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ဦးတည်းကပဲ စီစဉ်ကိုင်တွယ်ပေးနေတဲ့အချက်ပါ။ ဒါ့အပြင် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာ Tattoo ပုံစံတူတွေရှိသလို မွေးနေ့ကလည်း တစ်နေ့တည်းဖြစ်နေပါတယ်။
Stage persona and identity[ပြင်ဆင်ရန်]
marshmello ဆိုတဲ့ အနုပညာနာမည် (stage name) ကတော့ marshmallow ရဲ့အသံထွက်ကို အစွဲပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ခေါင်းဆောင်းဟာ အဖြူရောင် marshmallow မုန့်ပုံစံဖြစ်ပြီး ဒီလိုနာမည်ပေးဖို့နဲ့ ဒီလို ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖုံးကွယ်ထားဖို့ကို အခြားနာမည်ကျော်မျက်နှာဖုံးစွပ် ဒီဂျေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ deadmau5 ဆီကနေ ကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ dadmau5 ဟာ သူ့ရဲ့နာမည်ကို Dead Mouse ဆိုတဲ့ စကားလုံးကနေ အစွဲပြုယူထားတာဖြစ်ပြီး မျက်နှာကိုလည်း လာဘ်ကောင်ကြွက်လေးပုံစံ ခေါင်းဆောင်းနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ marshmello ဟာ သူ့ရဲ့ သရုပ်အမှန်ဖုံးကွယ်ထားတာနဲ့ stage name ပေးတဲ့ပုံစံကို deadmau5 ဆီကကူးစက်ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို Alone မှာ သက်သေပြထားပါတယ်။ "Alone" သီချင်းထဲမှာ marshmello က Joel လို့အမည်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ကြွက်ကလေးကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Joel Zimmerman ဆိုတာကတော့ deadmau5 ရဲ့ နာမည်အရင်းပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ deadmau5 ဆီက inspiration ယူခဲ့တာဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ marshmello ဟာ အခုထိသူ့ရဲ့ သရုပ်သဏ္ဌာန်အမှန်ကို တရားဝင်ထုတ်မပြောသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ Dotcom တစ်ဖြစ်လဲ Chris Comstock သာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာ တစ်ချို့ ဂျာနယ်လစ်တွေက marshmello ဟာ Martin Garrix ၊ Jauz တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို မန်နေဂျာ Moe Shalizi စီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့ အခြား ဒီဂျေ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ feedme ဆိုတဲ့ Instagram အကောင့်ကနေ marshmello ဝတ်စုံနဲ့ ခေါင်းစွပ်ချွတ်ထားတဲ့ dotcom ရယ်၊ marshmello ခေါင်းစွပ်ဆောင်းထားတဲ့ အခြားတစ်ယောက်တို့ အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ 
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ Electric Daisy Carnival ပွဲတော်မှာတုန်းက သူ့အလှည့်ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်းချွတ်ပြီး မျက်နှာအမှန်ကို ထုတ်ပြမယ်ဆိုပြီး ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ခေါင်းဆောင်းချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒတ်ခ်ျဒီဂျေအကျော်အမော် Tiesto ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပုံတစ်ပုံတည်း အတူတွဲတွေ့ရတာတွေရှိသလို ဖျော်ဖြေရေးပွဲစဉ်ဇယားတွေအရလည်း Tiesto ဟာ marshmello မဟုတ်မကြောင်း အသေအချာပြောပြနေပါတယ်။ မီဒီယာတွေကလည်း Electric Daisy Carnival ပွဲက သရုပ်ပြမှုဟာ နောက်ပြောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာ အိန္ဒိယမင်းသမီး Urvashi Rautela က Chris Comstock ၊ Maejor ၊ မန်နေဂျာ Moe Shalizi တို့နဲ့ အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကို marshmello ရဲ့ တရားဝင် Facebook account နဲ့ Tag တွဲပြီးတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Silence သီချင်းမှာဆိုရင် ကူညီသီဆိုထားတဲ့ Khalid အပြင် နောက်ထပ် တေးရေးဆရာတစ်ယောက်က Comstock ဖြစ်ပါကြောင်း ASCAP မှာဖော်ပြထားပါတယ်။.
သူ့ရဲ့ ဂီတဟန်မှာ Bass အသားပေး Dance Music ပုံစံတွေတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ ဂီတပုံစံအမျိုးအစားဟာလည်း အခြားသော မျက်နှာဖုံးစွမ် DJ တွေဖြစ်ကြတဲ့ deadmau5 နဲ့ Daft Punk တို့ဆီကနေ ကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ခေါင်းမှာ အဖြူရောင်ခံထားတဲ့ ခေါင်းအဆောင်းကိုစွပ်ထားပါတယ်။ သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ "Beautiful Now" နဲ့ "Where are U Now" တို့ကို Remix လုပ် အွန်လိုင်းကနေဖြန့်ခဲ့သလို၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Single သီချင်း "Alone" ပါ ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးသီချင်းဖြစ်တဲ့ "WaVeZ" ကို Original Mix အဖြစ် SoundCloud မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် ဆက်တိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ အခြေကျပြီးသား နာမည်ကျော် DJ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Skrillex ရဲ့ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေ အများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။ Skrillex ဟာ marshmello ရဲ့ သီချင်း "Find Me" ကို သူ့ရဲ့ SoundCloud စာမျက်နှာမှာ ထပ်ဆင့် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ချို့နဲ့ သီချင်းအသစ်တွေပေါင်းပြီး "JoyTime" အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်ဟာ တော်တော်လေးပေါက်ခဲ့ပြီး Billboard ရဲ့ Dance/Electronic Album Chart မှာ နံပါတ် ၅ ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ "Keep It Mello" ကိုတော့ Rapper တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Omar LinX က ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ marshemello ရဲ့ မန်နေဂျာဟာ RedLight Management ရဲ့ Moe Shalizi ဖြစ်ပြီး Ookay, Jauz နဲ့ Slushii တို့ကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ - ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ် "JoyTime"[ပြင်ဆင်ရန်]
marshmello ဟာ ၂၀၁၆၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး တေးအယ်လ်ဘမ် JoyTime ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အယ်ဘမ်မှာ သီချင်းပုဒ်ရေ ၁၀ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး သီချင်းအားလုံးကို Joytime Collective ကနေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Single Song "Alone" ကိုတော့ Monstercat ထုတ်လုပ်ရေးကတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး "Monstarcat 027 - Cataclysm" ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ "Alone" သီချင်းဗီဒီယိုကို YouTube မှာလွှင့်တင်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ ၂၀၁၇ အရောက်မှာတော့ ကြည့်ရှုသူ သန်း ၅၀၀ ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ Record Label "Monstercat" ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး သီချင်းဗီဒီယိုလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ လက်စ်ဗီးဂတ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ "EDC 2016" ပွဲတော်မှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲတော်မှာ မှတ်မှတ်ရရ ဒတ်ခ်ျဒီဂျေ အကျော်အမော် "Tiesto" ဟာ marshmello နဲ့ ပုံစံတူဝတ်ဆင်ပြီး သူ့ကိုသူ marshmello အဖြစ်နဲ့ ခေါင်းအဆောင်းကို ချွတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း ရုတ်တရက် marshmello ဟာ Tiesto လို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ ဒါဟာ အပျော်သက်သက် စနောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Tiesto က ဝန်ခံခဲ့သလို သူတို့နှစ်ဦး အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ၊ Tour Date တွေအရ Tiesto ဟာ marshmello လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ Ritual Tour ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှုခရီးစဉ်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်ထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသာမက၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ပါရာဂွေးနိုင်ငံတွေအပြင် အခြားသော နိုင်ငံပေါင်းများစွာကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ "Ritual" သီချင်းကို Skrillex ရဲ့ Record Label ဖြစ်တဲ့ OWSLA ကနေ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းဗီဒီယိုကိုတော့ marshmello ရဲ့ YouTube မှာလွှင့်တင်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Record Label "Joytime Collective" ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို သူနဲ့ အတူတွဲနေကျ လူငယ်ဒီဂျေ "Slushii" ကို "Joytime Collective" ကနေ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ - ပူးပေါင်းဖန်တီးမှုများနှင့် Forbes တွင်ပါဝင်လာခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
marshmello ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ "Chasing Colors" ဆိုတဲ့သီချင်းသစ်ကို Ookay နဲ့ ပူးပေါင်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းမှာ "Noah Cyrus" က ကူညီသီဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် "Slushii" နဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ "Twinbow" ဆိုတဲ့သီချင်းကို ထပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့မှာတော့ အဲဒီနှစ်ရဲ့ တတိယမြောက် Single ဖြစ်တဲ့ "Moving On" ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာတော့ အမေရိကန် ဟစ်ပ်ဟော့အဆိုတော့ "Blackbear" နဲ့ သီချင်းသစ်တစ်ပု ပူးပေါင်းဖန်တီးဖို့ရှိကြောင်း Social Media ကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ "Demi Lovato" နဲ့ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ထပ်မံကြေညာခဲ့ပြီး အဲဒီသီချင်းရဲ့ နမူနာ အမြည်းကို "Coachella 2017" ပွဲတော်မှာ ဖျော်ခြေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ "Love U" ဆိုတဲ့သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေအတွက် အခမဲ့အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။
marshmello ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လမတိုင်မီ၊ ယခင် ၁၂ လအတွင်း စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းအထိရှိခဲ့ပြီး Forbes မဂ္ဂဇင်းကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ တစ်နှစ်တာအတွင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဈေးအမြင့်မားဆုံး ဒီဂျေတွေရဲ့ စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာတော့ "Khalid" ပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ သီချင်းသစ် "Silence" ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။
↑ Staff၊ Your EDM (February 20, 2016)။ Who Is Behind Marshmello’s New Protégé, Slushii?။
↑ Marshmello - Chart history (Billboard Hot 100)။ 27 March 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff၊ Your EDM (February 20, 2016)။ Who Is Behind Marshmello's New Protégé, Slushii?။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Gramm3r (June 29, 2015)။ Did Dotcom Just Confirm He’s Marshmello Post Skrillex/Katie Couric Interview?။ Fist In The Air။ 11 August 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ August 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Sachs၊ Elliot (May 21, 2016)။ Skrillex Confirms Rumor Of Marshmello's Identity With New Instagram Post။
↑ https://thump.vice.com/en_us/article/masked-djs-history-orbital-deadmau5-daft-punk-marshmello "A Brief History of Masked DJs—From Orbital to Marshmello"
↑ http://www.ravejungle.com/2016/11/02/marshmello-trolls-deadmau5/ "Marshmello trolls Deadmau5 in his music video and Joel responded quickly"
↑ "WHO IS MARSHMELLO?"၊ The Six Thirty၊ June 1, 2015။ March 2, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 20 December 2017။
↑ "An oddly compelling argument as to which famous DJ hides beneath"၊ Pilerats၊ March 2, 2016။ March 2, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Who is Slushii?"၊ EDM Chicago၊ February 18, 2016။ March 1, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 August 2017။
↑ Lucas (March 5, 2017)။ Marshmello's Identity Accidentally Revealed On Instagram Last Night [SCREENSHOT]။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာ့ရှ်မဲလို&oldid=676804" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။